Ofeleba nezigqoko zokugqoka → Izingubo zokusebenza • Imishini efekethisiwe yekhompyutha yeP & M
Izigqoko futhi imisipha ayingxenye yemishini BHP kuyadingeka ezindaweni zokusebenza ingozi eyengeziwe. Kuyimpilo nokuvikelwa kwezempilo.
Imikhiqizo etholakala ku-pm.com.pl ihanjiswa ngabakhiqizi abaziwayo. Uhla olubanzi lukuvumela ukuthi ukhethe kalula okuthile okufanele umsebenzi. Siqinisekisa ukuthi sicebisa njalo ukunikezwa kwethu ngemikhiqizo emisha.
Ukunikezwa kwethu sandisile ngama-balaclavas asebenziseka ikakhulukazi ebusika, izikhafu zikashimula, izigqoko zabapheki, izihlangu zobuso, amakepisi emeshini yokudla nabanye. Ngenxa yokubambisana njalo nabakhiqizi kanye nomthamo omkhulu wama-oda, siyakwazi ukunikela ngamanani akhangayo nokukhethwa okubanzi, nezaphulelo ezengeziwe kumakhasimende ajwayelekile.
Isigqoko sokuzivikela, isigqoko sokuzivikela sokuphepha
Omakalabha bokunethezeka nokuphepha
Izigqoko zokuzivikela ingashintshwa ukuze ivumelane nezidingo zakho njengoba zinezinto zokulungisa ezikuvumela ukuthi uzilungiselele ngokwezidingo zakho. Ukuguquguquka okunjalo kwezigqoko zokuzivikela kuhumusha kube ukunethezeka nokuphepha.
Izigqoko ezifakwe kahle, ngesikhathi somthelela, isb. Kusuka phezulu, zingashelela phansi kalula, ziveze ikhanda ekulimaleni kanzima. Sinikeza amamodeli amaningi ngemibala ehlukahlukene. Izinto okwenziwa ngazo izigqoko zokuzivikela ziyamelana nemiphumela emibi yezici zangaphandle, futhi akukho zinhlanganisela ezinobuthi ezisetshenziselwe ukuzenza.
Izindwangu zokuvikela isizini ngayinye
Esitolo sethu, sinikela ngokuqinile okwenziwe futhi kumnandi ukugqoka izigqoko zokuzivikela ngosayizi abahlukene abafanele izinkathi ezahlukahlukene. Entwasahlobo nasehlobo, sincoma izigqoko zokukhanya ezivikela ngempumelelo emisebeni yelanga enamandla.
Ebusika, ikakhulukazi emazingeni okushisa aphansi ngokweqile, izigqoko ezifakwe ngci zilungile njengoba zivikela ukushisa kwekhanda ngempumelelo. Sibancoma kakhulu kubantu abasebenza ngaphandle ezimeni ezinzima zezulu. Sinamamodeli wabesifazane nabesilisa esingakhetha kuwo, okusiza ekukhetheni imikhiqizo.
Kulabo abafuna izigqoko zokuzivikela ezilula ezifana nekepisi eline-visor, sinokukhetha kwamamodeli avela kubakhiqizi be-JSP ne-REIS.
Ngakho-ke ukukhanya izigqoko zokuzivikela hlinzeka ngokuvikelwa okuyisisekelo ekuthintekeni ezintweni ezilukhuni. Maphakathi kukhona okufakiwe okwenziwe nge-HDPE noma i-ABS plastic ngohlelo lokumunca ukushaqeka, ngokungeziwe kufakwe izinto zokunethezeka okwengeziwe.
Izigqoko zinemigodi yokungenisa umoya, imichilo yokulungisa, namaphakethe angaphakathi akuvumela ukuthi ususe isiqinisi, ngaleyo ndlela ikuvumela ukuthi ugeze ikepisi noma wenze ukumaka imifekethiso yekhompyutha.
Isigqoko sokuphepha esikhanyayo, esiqiniswe ngemifekethiso
Isigqoko se-Reis esifakiwe
izigqoko zomsebenzi ezimhlopheizigqoko zomsebenziizigqoko zomsebenzi ezine-visorizikejana zomsebenzi wasebusikaamakepisi e-baseballizigqoko zomsebenzi wasebusika zabesilisaizigqoko zomsebenzi wasebusikaizigqoko zokuzivikela zomsebenziizigqoko zokuphepha zomsebenziizigqoko zokusebenzaimibala isebenza izigqoko zokuzivikelaizigqoko zokusebenza olxIzigqoko zomsebenzi we-uvex